Real Madrid Oo Loo Caleema Saaray Horyaalka Spain - jornalizem
Real Madrid Oo Loo Caleema Saaray Horyaalka Spain
Kooxda Real Madrid ayaa ku guulaysatay horyaalka Spain kadib maarkii 3-0 ay ugu badisay kooxda Atletico Bilboa.
Goolasha oo ay u kala dhaliyeen ciyaartooyda kala ah Gonzalo Higuain, Mesut Ozil iyo Cristiano Ronaldo ayay 3-0 kaga badisay kooxda Atletico Bilboa.
Ciyaartaan oo ka dhacday garoonka san Memes ee magaalada Bilboa ee dalka Spain ayaa lagu calaamadeeyay Real Madrid inay markeedii 32 qaado horyaalka Spain oo ay ugu dambeysay sanadkii 2008.
Kadib markii ay kooxda Real Madrid qaaday horyaalka ayaa tababaraha koxda Real Madrid Jose Mourinho uu sheegay inuu filayay inuu qaadi karo horyaalka Spain markiisa ugu horeeysay waana markii 32-aad oo ay Real qaado horyaalkaan.
Koooxda Barcelona oo ahayd kooxda kusoo xigtay ayaa todobaadkii hore looga adkaaday ciyaar ka dhacday garoonka Camp Nou ee magaalada Barcelona halkaas oo looga badiyay 2-1 waana ciyaartii kala reebtada ahayd ee dhexmartay labadaan koox.
Tababare Jose Mourinho uu u dhashay dalka Portugal ayaa ku guulaystay isagoo tababare ah afar horyaal ada afar dal oo Yurub ah,kuwaas oo kala ah FC Porto oo Portugal ah,Chelsea oo England ah,Inter Milan oo Italy ah iyo Real Madrid oo Spain ah.
Kulankaan ayaa imaanaya iyadoo todobaadkii hore ay Real Madrid kazoo hartay koobka naadiyada yurub oo Bayern Munich Rigoorayaal kaga badisay.
Sidoo kale C.Ronaldo ayaa mar kale laga qabtay Rigoore kadib markii goolhayaha Bayern Munich Manuel Neuer uu ka qabtay halka kulankaan uu ka badbaadiyay Rigoore goolhayaha Atletico Bilaboa Gorka Iraizoz.
“weee adkeyd inaan ka qaadno horyaalka koox sida Barcelona oo kale laakin waan ku guulaysanay taas ayuu yiri Kabtanka kooxda Real madrid Ikar Casilas ooo intaas ku daray inay ka adkaadeen kooxda loolanka kala dhaxeeyay ee barcelona ugu dambeena aan ku guulaysanay horyaalka ugu wanaagsan ee laliga Spain.
Ciyaartooyda kooxda Real Madrid ayaa dabaal dagay kadib markii seeriga uu ku dhuftay garsooraha oo ciyaarta dhamaatay iyadoo tababare Mourinho uu todobo farood kor u taagay taas oo muujinaysay 7 horyaal oo uu qaaday waayihiisa tababarnimo.
“waxay ahayd mid aad u adag tani oo aan todobo dhibcood ka sareeyo Barcelona iyadoo labo ciyaarood harsantahay ayuu yiri Tababare Jose Mourinho.
Xulka Real Madrid ayaa si rasmi ah dabaal dag u sameenaya qamiista waxaana ay ka dhacaysaa caasimadda spain ee Madrid waana markii ugu horeysay oo ay u dabaal dagaan tan iyo markii tababare Pep Guardiola uu noqday macalinka Barcelona 2008.